NINE « MMWeather Information BLOG
By mmweather.ygn, on July 31st, 2013%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်၌ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST-91W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 09W(NINE)အဖြစ်သို့ရောက်ရှိကာ အနောက်မြောက်ဘက်(Heading 300 degree)သို့ တစ်နာရီ ၇ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားလျှက်ရှိပါသည်။ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး လာမည့် ၁၂ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိကာ ဟိုင်နန်ကျွန်းနှင့် တုံကင်ပင်လယ်ကွေ့အား ဖြတ်သန်း၍ ဗီယက်နန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု JTWC မှ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ထုတ်ပြန်ထားသော Warning-1 တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ (ပုံ-၁)
310300Z POSITION NEAR 15.1N 115.9E. TROPICAL DEPRESSION 09W (NINE), LOCATED APPROXIMATELY 451 NM . . . → Read More: မုန်တိုင်း ၂ခုကြားကျရောက်မည့် အခြေအနေကြောင့် မိုးကြီးရေလွှမ်းမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်
One comment Uncategorized ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 09W-NINE တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိ
By mmweather.ygn, on July 21st, 2012%
ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 09W(NINE – ဖိလစ်ပိုင်အမည် FERDIE) သည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်လာပြီး ဟောင်ကောင်၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၃၁၀ မိုင်ခန့် အကွာသို့ ရောက်ရှိ ဗဟိုပြုကာ လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၀ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပါသည်။
ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာန(TYPHOON 2000) မှ ခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ချက်အရ လာမည့် တနင်္လာနေ့တွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း ဟောင်ကောင်၏ တောင်ဘက်မှ ဖြတ်သန်းရင်း အင်အားပိုမိုကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
NRL မှ ခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းပုံဖေါ်မှုအရ မုန်တိုင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိလာပြီးနောက် လာမည့် ၇၂ . . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 09W-NINE တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိ